Google Play Store မှာ “No Connection – Retry” ဆိုတာကိုဖြေရှင်းဖို.နည်းလမ်း - Software Guide
Home / နည်းလမ်းများ / Google Play Store မှာ “No Connection – Retry” ဆိုတာကိုဖြေရှင်းဖို.နည်းလမ်း
Google Play Store မှာ “No Connection – Retry” ဆိုတာကိုဖြေရှင်းဖို.နည်းလမ်း Reviewed by Ko Lin on 3:49:00 AM Rating: 5
Google Play Store မှာ “No Connection – Retry” ဆိုတာကိုဖြေရှင်းဖို.နည်းလမ်း
Ko Lin 3:49:00 AM နည်းလမ်းများ
ဒီပြသနာကတော.Android User အတော်များများကြုံဖူးကြလိမ်.မယ်ထင်ပါတယ်..။ Play Store ကို ၀င်တဲ.အခါမှာ “No Connection – Retry” ဆိုတဲ. Error message ကို ပဲတွေ.ပြီး Play Store ကို ၀င်လို. မရတာကိုပေါ...။တစ်ခြား Application တွေ ( Facebook / Chat / Browser )တွေအား လုံးကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေပြီး Play Store တစ်ခုထဲသာလျှင် ဝင်မရတဲ.ပြသနာပေါ..။ ကျွန်တော်. ဖုန်းမှာကြုံ လာတာနဲ. အမျိုးမျိုးဖြေရှင်းကြည်.တယ်..။ဖုန်းကို Restart ချတယ်။ VPN / DNS Server တွေ Change တယ်..။ Internet Connection ကို Wifi နဲ. Mobile Data Connection အမျိုးမျိုးပြောင်း သုံးကြည်.တယ်..။
1.Fix Date and Time Settings ဒီနည်းကတော. ၈၀% သေချာသလောက်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.။Settings > Date & Time ကိုသွားပါ..။Automatic date & time မှာ Check လုပ်ပေးထားလိုက်ပါ..။
2.Clear Google Play Store Data Android OS တွေမှာ Google Play Store ကိုဝင်တဲ. History/Cache တွေကို သိမ်းဆည်းထားတတ်ပါ တယ်..။ နောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ခဲ.ရင် Server နဲ. Device ကိုလွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်အောင် ပါ..။ဒါကလဲ တစ်ခါတစ်လေမှာ Connection error အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ.နောက်ကွယ်က အကြောင်း အရင်းတစ်ရပ်ပါ Setting > Application manager > All သွားလိုက်ပါ..။Clear data button ကိုနှိပ်ပါ.။
3.Change or Re-login your Google account သင်.ရဲ. Google account password နဲ. Security Settings တွေကို အမျိုးမျိုးပြောင်းခဲ.မယ် ချိန်းခဲ.မယ် ဆိုရင် သင်.ရဲ. Android Device ပေါ်မှာလည်း Update လုပ်ပေးဖို.လိုပါလိမ်.မယ်..။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားအကောင်. ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်..။Settinf > Account > Google ကိုသွားပါ..Remove Account ကိုနှိပ်ပါ..ပီးရင် Play Store ကိုနှိပ်ပီး အကောင်. Sign in ပြန်လုပ်ပါ..။
4.Uninstall update ကိုယ်.ရဲ. Device မှာ Auto update ထားခဲ.လျှင် Google Play Store က Update တွေဟာ User Permission မရှိပဲအော်တိုချိန်းသွားတတ်ပါတယ်.. အပေါ်ကပြောခဲ.တဲ.အချက်တွေနဲ. မပြေလည်သေးဘူး ဆိုရင်တော. သင်.ရဲ. Google Play Store App ကိုသာ Uninstall လုပ်ကြည်.ပါ..။
5.Remove any Proxy or VPN softwareGoogle Play Store ကိုပြန်မ၀င်ခင်မှာ ကိုယ်. Device ထဲမှာ Run ထားတဲ.Proxy Server / Fake location /Hotspot Shield VPN အစရှိတဲ.ဆော.၀ဲလ်မျိုးတွေကိုအရင် Remove လုပ်ထားပါ..
6.Delete hosts file Rooted Device တွေမှာဆိုရင်တော.အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ကြည်.ပါ..Open file managerroot / system အစရှိတဲ.ဖိုင်တွေကိုရှာပါ hosts.txt ဆိုတဲ.ဖိုင်ကို delete လုပ်ပါ..။
7.Factory Reset to your Deviceအပေါ်ကနည်းတွေအားလုံးနဲ.မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော.ဓါတ်ကြမ်းတိုက်ကုဖို.ပဲရှိတော.တာပေါ.နော်။သင်.ရဲ. Device ကို Factory Reset သာချဖို.ပဲကျန်ပါတော.တယ်..။Factory Reset မချခင်မှာ Device ကိုData တွေအားလုံး Back up ယူထားဖို.တော.မမေ.ပါနဲ့ . . . . . .